Umbhali nencwadi eqwashisa intsha | News24
Umbhali nencwadi eqwashisa intsha
USamukeliso Mthembu. PHOTO: supplied
UNESIFISO sokubona incwadi yakhe ifundwa ezikoleni umbhali waseSobantu osanda kukhipha incwadi esihloko sithi “Liph’ iwele lami?
USamukeliso Mthembu (31), uthi ngale ncwadi uhlose ukuqwashisa intsha ngezinye zezingqinamba engazithola ibhekene nazo empilweni uma ithatha izinqumo ngokuxhamazela.
“Ngokubuka izimo ezenzekayo ikakhulukazi lapho abesilisa bengawumeli umsebenzi wabo wokuba obaba. Lencwadi ngifuna itshengise intsha ukuthi akukuhle ukuba izibandakanye kwezocansi isakhula ngoba lokho kuba nemithelela emibi abangeke bakwazi ukumelana nayo.”
Lencwadi ikhuluma ngezithandani ezisencane zase Tanzania ezithola ukuthi sezizoba abazali bamaphahla. Kugcina ngothi umfana ashiye lona owesimame ozithwele naye ogcina enikele ngabantwana kosonhlalakahle ngoba engakwazi ukubhekana nomsebenzi wokubanakekela yedwa.
“Lona wesifazane unikela ngabantwana kosonhlalakahle baseNingizimu Afrika ngenxa yezimpi zezombusazwe ezweni lakubo. Abantwana bafika kuleli bahlukaniselwe imindeni emithathu bakhule bengazani kodwa bahlangane ngokuhamba kwempilo.”
UMthembu uthe incwadi othi mawuyilandelela ufunde okuningi kuyo.
“Ngiyibhale yaba isimanjemanje ukuze abantu abasha bezokwazi ukuthi noma beyifunda bahlobane nayo. Ibalula izinkundla zokuxhumana ezifana noTwitter no Facebook ukuze ingeke ibabhore uma beyifunda. Iphinde ibalule nabantu abaziwayo kanye nezindawo zalapha eMgungundlovu yize iqala ezweni laseTanzania.”
Lombhali uthe okwamanje ubesenze amakhophi amathathu kuphela ngenxa yokushodelwa imali.
“Ngizamile ukuhlanganisa imali ngenza amakhophi ambalwa ukuze uma ngiyongqongqoza eminyangweni eyahlukene babone ukuthi ngikhuluma ngani. Ngingathanda ukuthi izinhlaka zikahulumeni zingixhase ukuze ngenze amanye amakhophi nencwadi igcine ifinyelela emtapweni yolwazi kulelidolobha kanye nasezikoleni.”
Uthe ufisa lencwadi ifundwe ezikoleni ngoba yilapho abantu abasha bebhekana khona nezingqinamba. “Ngifuna iye ezikoleni ngoba yilapho abantu abasha bebaningi khona nalapho izinkinga zokukhulelwa, ama-Blesser kanye nokunye ziqala khona.Incwadi ibalula kakhulu ukubaluleka kwemfundo kanye nezingqinamba ezibhekana nabantu abasha nokuthi bangadlula kanjani kuzo.”
UMthembu uthe useke wazama ukuxhumana neminyango efanele ukuze incwadi yakhe itholakale ezikoleni kanye nasemitapweni yolwazi kodwa wehluleka.
“Akulula ukuxhumana nabantu abasezinhlakene ezifanele abangangisiza ukwenza isifiso sami sifezeke. Ngike ngazama ukuxhumana nabomnyango wezemfundo kodwa bathembisa ukuthi bayobuyela kumina kuze kube imanje akukenzeki lokho.”
Abathanda ukuba nekhophi yalencwadi yalencwadi bangayithola ngo R70 kwaMphemba Book Sellers ngokushayela u084 697 9250.